I-Raw Flibanserin powder (167933-07-5) hplc = 98% | Ukusetshenziselwa Kwabesifazane Ukusebenzisa Ukusetshenziswa
/ Imikhiqizo / Ukuya ocansini kuthuthukisa amaHormoni / Ukusetshenziswa kwabesifazane / Flibanserin powder
SKU: 167933-07-5. Categories: Ukusetshenziswa kwabesifazane, Ukuya ocansini kuthuthukisa amaHormoni
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza amandla kusuka kugramu ukuya ku-mass order ye-Flibanserin powder (i-167933-07-5), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
Flibanserin powder isiqophi
I-Raw Flibanserin powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Formula Yamamolekhula: C20H21F3N4O
Ukusetshenziswa kwe-Raw Flibanserin powder
Igama lebhizinisi le-Flibanserin lihlanganisa u-Ectris noGirosa, futhi igama laso langaphambili lekhodi lokuthuthukiswa yi-BIMT-17, igama lomkhiqizo wamanje ngu-Addyi.
Ukusetshenziswa okugqamile kwe-Flibanserin powder
Umthamo we-FDA ovunyelwe u-Flibanserin 100mg nsuku zonke ngesikhathi sokulala unyuke inani lemicimbi egculisayo ngokocansi (SSEs) kusukela esisekelweni ngomcimbi owodwa ngenyanga uma kuqhathaniswa ne-placebo. Thatha i-Flibanserin ngesikhathi esithile ngaphandle kokulala ngesikhathi kungalala kungakwandisa ingozi yokucindezeleka kwegazi eliphansi, ukuphelelwa amandla (ukulahlekelwa yilazi), ukulimala ngengozi nokulala.
Isexwayiso ku-Raw Flibanserin powder
I-Flibanserin ayikona ukwelashwa kwe-HSDD kwabesifazane abaye badlula esikhathini sokuya esikhathini noma kumadoda, noma ukuthuthukisa ukusebenza kocansi. Futhi hhayi ukusetshenziswa ezinganeni.
I-Flibanserin yaqala ukuthuthukiswa njenge-anti-depressant ngaphambi kokuba iphinde iphinde isetshenziswe ukwelashwa kwe-HSDD. Umthelela ohlangothini lwe-Flibanserin uyisimo sezulu, isicanuca senzeka cishe izikhathi ezintathu kuya kwezine ngokuphindaphindiwe nokulala, uzizwa ukhathele.
I-Flibanserin Raw Powder
Indlela yokuthenga i-Flibanserin powder kusuka ku-AASraw
I-AASraw inikeza ubumsulwa i-98% Flibanserin powder obuluhlaza kumalabhu angaphansi komhlaba noma abasebenzisi bokuthuthukisa ubulili besifazane.
Ama-Recipes Powder Recipes ama-Flibanserin: